Zvidzidzo zvekuchipatara paTabex - Mushonga wepanyama wekurega kuputa
Zvidzidzo zvekuchipatara paTabex
Clinical Zvidzidzo nezve kugona kwaTabex
Tabex cytisine yakaongororwa kiriniki pane akati wandei evarwere. Stoyanov S. Uye Yanachkova M. Mumwe wevagadziri veCytisine akadzidza 70 vanozvipira vane hunyanzvi hwakareba pakurega kuputa uye vakaona kuti 57 muzana yevarwere vakarega kuputa pa31.4 muzana mhedzisiro yacho yaive shoma: kudzikiswa kwemidzanga yakasvuta kubva 20-30 kusvika 3-4 pazuva. Mhedzisiro yaive isina kunaka mu11 muzana yevarwere izvo zvinokonzerewa nekumira kwekutanga kweTabex: zuva rechitatu risati rasvika rekurapa - nguva yakatarwa yekuzadza muviri necytisine. Muboka rechipiri revasvuti gumi nevanomwe vane hosha dzakanyanya, manejimendi eTabex pamwe neantipsychotic, antidepressants uye insulin yakaraira varwere vashanu kuti vasiye kusvuta uye vakonzere kudzikira.
Nekudaro tabex haishamwaridzane nekufarira mishonga inogamuchirwa nemapoka evarwere. Vlaev S. Et al. Inofunga mukana wekudzora zvinoshungurudza zviratidzo muvarwere vashanu vane psychogenic uye periodic kushushikana muTabex dosage uye kushanda. Tabex yakaiswa zvishoma nezvishoma kuwedzera doses, iyo yakanyanya zuva nezuva dosi iri 15 mg. Kuderedzwa nekukurumidza kwezviratidzo zvekushushikana, kuvandudzwa kwevarwere vane kushushikana kwepfungwa kunowanikwa mukupera kwevhiki yekutanga. Mune varwere vane nguva nenguva kushushikana - kubva kupera kwevhiki rechipiri. Semhedzisiro mhedzisiro, kunetsekana kwemukati uye kuderera kudiki kweropa BP kunongedzwa
Iyo antidepressant mhedzisiro yemushonga inotsanangurwa pamwe nekuwedzera kwecatecholamine level, kunyanya adrenaline iyo inoderedzwa kune varwere vane kushushikana. Iyo adrenostimulating mhedzisiro yaTabex yanga ichizivikanwa kwenguva yakareba, asi rake rekudzvinyirira chiitiko chakataurwa naAntonov L. Uye V. Velkov. Mhedzisiro yekurapwa naTabex cytisine kuchipatara cheFriedrichsheim kuBerlin kunoratidza kudzikira kwehuwandu hwevasvuti vakasiya kuputa neTabex cytisine. Iyo antidepressant chiito inosimbiswa ne psychosis muvarwere vaviri vakagamuchira Tabex cytisine mune mamiriro ekuregererwa.
Mhedzisiro yacho yakafanana nekushandiswa kweanodzvinyirira psychoforin yevarwere. Aya manhamba anosimbiswa naStoyanov naJanachkova mune varwere vepfungwa. Vanyori vanoti rudzi rwekusuwa rwakakodzera kurapwa kweTabex nekuwedzera kwekuchenjera kwemiyero yezuva nezuva. Paun D. Uye Franze J. Kubva kuchipatara cheFriedrichscheim kuBerlin vakadzidza nezvekurapa kweTabex muvanhu 266 vanoputa, nekuzvienzanisa neboka re239 re placebo. Mhedzisiro yakateverwa pane rechina, rechisere, regumi nematatu uye makumi maviri nematanhatu vhiki mushure mekushandisa Tabex.
Varwere vane chinangwa chakakomba chekurega kusvuta vane pekutanga. Pavhiki rechisere, 55% yevarwere vanorapwa naTabex varega kuputa, iyi muzana ichiderera kusvika pa26% mukupera kwevhiki 26. Vagadziri veboka guru vadzikira nekaviri nhamba yefodya yakadyiwa. Vanyori vanoratidza zvakasarudzika mhedzisiro yeavo vakarapwa naTabex kana vachienzaniswa neboka rakarapwa ne placebo uyezve vanopedzisa kuti Tabex inogona kushandiswa zvinobudirira kana murwere aine chinangwa chakakomba chekurega kusvuta. Zvidzidzo zvekiriniki paTabex zvakaitwawo naTabex yakapihwa kune makumi matanhatu nevatanhatu vanoputa vane hepatitis uye 366 varwere vanorapwa ne placebo.
Mushure mekupedza iyo yakazara kosi, 55% yevarwere vakasiya kuputa, uye zvakare iro boka rine placebo kwaive nemhedzisiro muiyo chete 34 muzana. Kunze kwevapfuuri mazana maviri nemaviri vane bronchitis inorapwa neTabex 230% vakasiya kuputa naTabex pakupera kwevhiki rechina, uye mushure memavhiki masere - 85% uye mushure memwedzi 4 - 66%. Mhedzisiro iyi yakave yakanyorwa zvakawandisa uye kushandiswa mune zvimwe zvidzidzo zvekiriniki. Tabex cytisine mapiritsi akawedzera kuwedzera kudiwa nekuda kwekuchengetedzeka uye hutano hutano zvayakanakira yazvinopa zvichienzaniswa neicicinine yakavakirwa pakudya zvinovaka muviri. Kutevera ndiwo mushonga naTabex Cytisine paboka rine njodzi revaputi muBerlin nePotsdam.
Schmidt F. Akaitisa kuwanda kuyedzwa kwemishonga gumi nemana yevanosvuta va14 nenzira yekaviri blind blind placebo inodzorwa kuyedzwa. Tabex yakapihwa kuvarwere zana negumi nevatanhatu. Mhedzisiro inoratidza kuti varwere vanorapwa naTabex vaive nekuvandudzika kwakanaka. Varwere zana nemakumi mapfumbamwe vakasiya kusvuta mushure memwedzi mitatu iyi muzana umo zvakadzikira kusvika pa1975%. Tabex inoteverwa nekushandisa mishonga niperli, atabaco, citotal, unilobin, potassium chloride, potasium granulate, potassium citrate, nicobrevin, targofagine, nezvimwe.Vazvipiri vese vakagamuchira neemail nzira yekushandisa Tabex senzira yekudzivirira mhedzisiro yemamiriro ekunze, saka mhedzisiro yakanyorwa nevarwere ivo pachavo mumafomu emibvunzo akavimbika.
Tinogona kutora mhedzisiro inotevera maererano nehunyanzvi hwekurapa kwaTabex: Mushonga Tabex wakaongororwa pavane 1045 vanozvipira uye uchienzaniswa nevarwere mazana mana vakarapwa ne placebo uye 400 varwere vaibatwa nemamwe madhiragi ekuputa fodya. Mhedzisiro yakawanikwa inoratidza kuti 1500 kusvika ku55% yevarwere vanorapwa naTabex vakasiya kuputa. Aya mapesenti akajairika kubva kuzvidzidzo zvakasiyana siyana anoverengera kukosha uye nekudaro akakura kupfuura ayo eimwe gadziriro achienzaniswa. Tabex yakaratidza kukanganisa kwakanyanya pazvirwere zvenguva refu zvemapapu zvine chekuita nekusvuta kwenguva yakareba, pamwe nevarwere vane chirwere chepfungwa chepfungwa yekushungurudzika.
Hapana mhedzisiro yakakomba yakawanikwa nekushandisa Tabex Cytisine. Iko kukuru kuvandudzwa kweyakajairika mamiriro evarwere kwakacherechedzwa nekuda kwekuregera nicotine. Ongorora: 2 mwedzi kutenderera mabhenefiti. Varwere vasina hanya mukirasi yekutanga vanofanirwa kudzokorora kosi yacho pamwedzi wechipiri.
(Tabex inogara ichikurudzirwa kuchovha bhasikoro kaviri kuitira zvakanyanya mabhenefiti). Kana izvi zvikatadza dzokorora kosi panguva dzakasiyana dzemwedzi mina kusvika kumashanu apa uchiedza nesimba rekurega kuputa naTabex pakati.
Tabex inoshanda sei mukati mehuropi hwako? Mashandisiro aungaita Tabex Nezve iyo Laburnum Muti